March 14, 2012 – democracy for burma
Statement News Release From PWO March 13
On March 14, 2012 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
မြန်မာ့မြှားဦးကုမ္မဏီနှင့် လွယ်လွမ်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ထွန်းတို့ပူးပေါင်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ နမ့်ဖတ်ကာဒေသတွင် ဒေသခံပြည်သူလူထုများမှ မှီတင်းလုပ်ကိုင်စားသောက်နေသော နမ့်မောချောင်းနှင့်နမ့်ခါချောင်းအား သတ္တုတွင်း တူးဖော်ရန် စတင်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို အမြန်ဆုံးတားဆီးပေးရန်အတွက် မတ်လ ၅ရက်နေ့ ၂ဝ၁၂ခုနှစ်တွင် နမ့်ဖတ်ကာကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လိပ်မူဖြင့် မြန်မြာ့မှားဦးကုမ္မဏီ ဥက္ကဌထံ ဒေသခံပြည်သူပေါင်း (၂၄ဝ)၏ လက်မှတ်များဖြင့် စာရေးသားပို့ပေးခဲ့သည်ဟု နယ်ခံရွာသူမှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
Phone Maw Day -Human Rights Day-Daw Aung San Suu Kyi Speech-mp4
Rights to Live -HreibTV
TNLA, KIA, and SSA together Bombed Burmese battalion (130)
66)0801184479, 084 573 9331
Burmese Migrants!! branch office for nationality verification and issuance of passports to migrant workers is to be opened in Chiangmai today
On March 14, 2012 March 14, 2012 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
14 march 2012 A branch office for nationality verification and issuance of passports to migrant workers is to be opened in Chiangmai today, at the 700th Anniversary Stadium premises. It will halve the costs in going to Tachilek in order to complete the process, according to an aid worker. One migrant who has received his passport in Tachilek says he paid 6,800 baht ($ 266.66) for the services